Mamorona ny vokatry ny typographic an'ilay sarimihetsika STAR WARS vaovao | Famoronana an-tserasera
Pablo Gondar | | Fitaovana famolavolana, Photoshop
Mianara mamorona ny vokatry ny typografikan'ilay sarimihetsika vaovao Star Wars dfomba mora sy tsotra amin'ny alàlan'ny programa fandaharana famerenana sary tsara indrindra. Miaraka amin'ny fanampian'ny Photoshop hamorona afisy kely izahay milalao miaraka amin'ny eendrika afisy avy amin'ny sarimihetsika tany am-boalohany, nahavita firaketana mitovy amin'izany.
Ny afisy vaovao an'ny Star Wars Tena manintona izy noho ny typografika, izany effet famenoana typographic miaraka amin'ny sary dia ampy manaitra ary manintona ny olona rehetra tia an'izao rehetra izao Star Wars izay maniry hanana ny endriny manokana amin'io fomba io.
Ny zavatra voalohany hataontsika dia manokatra antontan-taratasy en Photoshop manomboka miasa.
Hila iray isika Imagen hanampy azy ao anaty lahatsoratra.
Raha ny tokony ho izy dia manana a fitoviana mitovy amin'ny afisy, Amin'ity tranga ity dia ny format voafantina dia A4. Ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia manampy lahatsoratra, Azontsika atao ny mampiasa ny typeface rehetra ananantsika ao amin'ny solosaintsika satria raha te hahay hanao ny vokany isika, dia misy miasa ho antsika. Raha tianao hitovy amin'ny iray amin'ny sarimihetsika azonao atao ny afisinao to download ny sasany ao amin'ny IInternet.
Ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia tariho ny sary amin'ny antontan-taratasinay.
Raha vantany vao misokatra ny sary dia handeha isika mamorona ny vokam-panoratana miaraka amin'ny famenoana. Azontsika atao izany fomba roa: amin'ny alàlan'ny a Copia na mampiasa a saron-tava, Hianarantsika ireo rafitra roa.
Miaraka amin'ny sary efa voaomana, ny zavatra manaraka hataontsika dia tsindrio ny typography fanindriana ny bokotra fanaraha-maso (fifehezana + kitiho) raha nahavita tsara isika dia tokony hahita tsipika voaravaka manodidina ny sarintsika.
Ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia safidio ny sarinay (tsy mila famafana ny endritsoratra) dia handeha eo amin'ny menio ambony indrindra isika ary hanery ny safidy sosona / sosona vaovao amin'ny alàlan'ny kopia. Ity dia hahazo Photoshop adikao ny sombin-kevitra izay nataonay tamin'ny taolam-paty fa satria eo an-tampon'ilay sary izahay dia mandika an'io ampahany amin'ilay sary io.
Raha nandeha tsara ny zava-drehetra dia tokony hanana ny antsika isika lahatsoratra amin'ny endrik'ilay sary.
Ankehitriny dia hanao toy izany koa isika fa mampiasa ny saron-tava. Izahay dia manao dingana mitovy amin'ny fisafidianana ny endritsoratra fa tsy ny famoronana sosona vaovao izay ataontsika dia tsindrio eo amboniny kisary saron-tava.
Araka ny hitantsika mamorona an'ity vokatra ity dia zavatra iray tena mora sy hainganaMila misafidy kely fotsiny isika ary avy eo amin'ny tsindry tsotra dia mahazo ny vokany.
Tsy manana fialantsiny intsony ianao avelao ho entin'ny hery ianao ary mamorona ny volanao manokana amin'ny alàlan'ity teknika ity Photoshop, fomba mahaliana iray ity hanohinana ity programa famerenana nomerika nomerika ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Mamorona ny vokatry ny typographic an'ilay sarimihetsika STAR WARS vaovao